Zvikonzero zvishanu zvekusaisa mimhanzi yako kana mavhidhiyo kune wechitatu bato | Martech Zone
Svondo, Gunyana 24, 2006 Mugovera, March 31, 2007 Douglas Karr
Vangani venyu vanoverenga "Mitemo Yekushandisa"? Kana iwe uchipa zvirimo kuburikidza nechetatu bato, iwe unogona zvechokwadi kuda kuifungisisa zvakare. Mikana ndeyekuti ivo vane yakazara, yemadzimambo-yemahara, mvumo yekugadzirisa uye kugovera zvemukati zvako pasina kumbobhadhara iwe nezvazvo. Kana uchizopinda mudambudziko rekucheka vhidhiyo, mp3, Podcast, nezvimwe…. shandisa mari yacho woitambira wega. Nenzira iyoyo haufanire kubvumirana neimwe yeiyi Inoshamisa Mitemo Yekushandisa iyo inobvumidza imwe kambani hombe kuti iite kunyange ZVIMWE mari kubva pane zvemukati.
Kana iwe ukaisa vhidhiyo kuYouTube uye Youtube inowana miriyoni kurova pairi… iwe unongoisa mari muhomwe yavo! Sei iwe uchigona kudaro?
Youtube - iwe uri kupa Youtube rezinesi repasirese, risingasarudzwe, risingabhadharwe, risingabhadharwe uye rinoshandisirwa rezenisi rekushandisa, kuberekesa, kugovera, kugadzirira mabasa anobva, kuratidza, uye kuita Zvekushandisa zveMushandisi zvine chekuita neWebhusaiti yeWebhu uye yeYouTube (uye mutsivi wayo) bhizinesi, kusanganisira pasina muganho wekusimudzira uye kugovera patsva chikamu kana yese yeYebhusaiti Webhusaiti (uye zvinobva pamabasa ayo) mune chero mafomati enhau uye kuburikidza chero midhiya chiteshi.
Google - urikutungamira nekupa mvumo Google ku, uye kupa Google kodzero yemahara, isina-yakasarudzika uye rezinesi, kugashira, cache, nzira, kufambisa, kuchengeta, kuteedzera, kugadzirisa, kugovera, kuita, kuratidza, kugadzirisa, kuburitsa, gonesa kutengesa kana kubhadharisa makopi e, ongorora, uye gadzira algorithms anoenderana neAkatenderwa Zvemukati kuti (i) igamuchire Zvakabvumidzwa Zvemukati pane maseva eGoogle, (ii) kunongedzera iyo Yakatenderwa Zvemukati; (iii) kuratidza, kuita uye nekuparadzira Yakatenderwa Zvemukati
MySpace - Nekuratidzira kana kutsikisa ("kutumira") chero zvirimo pane kana kuburikidza neMySpace Services, iwe unopa izvi kuna MySpace.com rezinesi rakatemwa rekushandisa, kugadzirisa, kuratidza pachena, kuratidza pachena, kubereka, uye kugovera izvo Zvemukati chete pa uye kuburikidza neMySpace Services.
FLURL - Iwe unopa izvi sevhisi rezinesi risingasarudzike kushambadzira, kushambadza, kutengesa, rezinesi, kushandisa, uye kushandisa chero nzira, zvese zvinhu zvinopihwa Service, Webhu saiti, uye / kana kushandiswa chero nenzira neiyo Service, kusanganisa asi kungogumira kumumhanzi, mifananidzo, zvinyorwa zvinyorwa, hunyanzvi, mazita, mazita uye marogo, zviratidzo, nezvimwe zvinhu zvehungwaru. Iwe hausi kuzobhadharirwa kurodha pasi kana zvimwe zvinhu zvinopihwa kuSevhisi.
DropShots - DropShots iri, kunze kwekunge zvataurwa neimwe nzira, muridzi wekodzero dzese dzekopisheni nedhatabhesi muSevhisi nezviri mukati. Iwe haugone kushambadzira, kugovera, kuburitsa, kushandisa zvakare kana kuburitsa chero zvirimo mune chero chinhu fomu (kusanganisira kufotokopa kana kuichengeta mune chero svikiro nenzira yemagetsi) kunze kwekuenderana neyakaganhurirwa yekushandisa rezinesi yakatarwa mune yedu copyright chiziviso.
Rega kupa zvirimo zvako mahara! Makambani makuru anovimbisa HAPANA kushandisa yako zvemukati kupfuura kugovera kuburikidza newebhusaiti. Iwo makambani makuru ACHAPA muripo kana vakashandisa zvemukati zvako kunze kwenzvimbo. Uye makambani makuru anozokutendera iwe kuti uenderere mberi neWAKO zvemukati - kunyangwe mushure mekusiya basa ravo.
Verenga Mitemo Yekushandisa!
Hunyanzvi hwakasununguka, zviwanikwa hazvisi…
Sep 24, 2006 na9:58 PM
Good post. Unofungei paRevver.com, iyo inopatsanura mari yawakawana kubva pane zvaunowana newe?
Sep 24, 2006 na10:16 PM
Ini parizvino ndiri kuwana 500 script kukanganisa pane yavo saiti…
Ini ndichatarisa Mitemo Yekushandisa kana yadzoka. Ini handisi gweta - ndangoona zvinyorwa zvakawanda uye nhaurirano dzichitaura pamusoro pevaunganidzi vemukati vachinyatso zivisa vashandisi vavo kuti ndiani 'muridzi' wezvirimo, mashandisirwo azvinoitwa, uye kuti mupi wezvemukati angamboripwa here kana kuti kwete. kushandiswa.
Sep 25, 2006 na2:23 PM
Yakanaka post, Doug.
Kunyanya tichifunga kuti kunyangwe akapfuma media hosting haichadhure ruoko uye gumbo… (Pano ndinogona kukurudzira MediaTemple kwandakachinjira mushure mekunge ndatendeka kune yangu yekutanga server supplier kweanenge makore 5. Vane kugutsikana kwevatengi kwakanyanya, uye ndakashamiswa nekumhanya kwavanopindura kune vasiri-geeky vatengi e-mail. (Uye kwete, ini handisi kushandirwa navo…)
Chimwe chikonzero chekusatambira iwe zvemukati pabato rechitatu ndechekuti, hauzive machinjiro avanoita marongero avo mune ramangwana - zvakanaka, kana kuti hauzive kuti unoshandura sei yako ... (Fungidzira kuti unoita vhidhiyo inotonhorera / rwiyo rwaunoisa. pamhepo, uye imwe sangano rekushambadzira rinoda kuzvitenga kwauri - haugone kuitengesa kana wangobvumirana nematemu akataurwa naDoug…)
Saka: gamuchira iwe pachako. Fara. Iva nekugadzira.
Uye seplug, heano mamwe mavhidhiyo andakapfura.
Mar 24, 2007 pa 11: 03 AM
Ndanga ndichida kukurumidza kutaura pachinyorwa chako. Kudos kwauri nekukurudzira maartist anofunga kuendesa midhiya yavo kune wechitatu bato mubati / muparidzi. Chokwadi, vanhu vazhinji vanogadzira vanotadza kutarisisa nezve bhizinesi uye zvemutemo zveindasitiri yevaraidzo uye zvinhu zvehungwaru, uye zvinogona kuve nyore kune vanhu vane mukana - vangave mamaneja, vamiririri, marekodhi (makuru kana madiki), kana webhusaiti vashandisi - tora mukana kune avo vasina ruzivo rwebhizinesi kana nzwisiso yekutanga yeUS mutemo wekodzero.
Izvo zvave zvataurwa, vaparidzi vebato rechitatu uye vanogovera vanosara vasina sarudzo kunze kwekuda kuti varidzi vekodzero vape wechitatu bato. zvisiri zvega rezinesi kune dzimwe kodzero dzeane copyright (muimbi), inter aliakodzero dzekuburitsa, kugovera, uye kuratidza pachena zvinyorwa zvine kodzero. Zvikasadaro, muparidzi webato rechitatu ari pasi pemhosva yekutyorwa kwekodzero. Ndokusaka mutauro uri mumashoko ambotaurwa ezvibvumirano zvekushandisa wakafanana (uye webhusaiti yedu haina mutsauko).
Kana muparidzi webato rechitatu achitsvaga chete rezenisi, saka iri fungidziro, uye sevhisi iyoyo inofanirwa kudzivirirwa, zvichienderana nemamiriro ezvinhu.
Mweya weRadio LLC
Apr 23, 2007 pa 4: 05 PM
Munhu anoita sei vhidhiyo yavo kana podcast? Ndine vhidhiyo pawebhusaiti yangu asi ndoita sei kuti veruzhinji vazvione?
Apr 26, 2007 pa 2: 07 PM
Ndokumbira utiudze nezvemakambani makuru aunotaura pakupera kwepositi yako! Unondisiya ndakarembera! Ndinoda kuchengetedza kodzero dzese pamusoro pemimhanzi yangu, asi ndinomanikidzwa kushandisa mamwe masvikiro nekuda kwechokwadi chiri nyore ndipo pane vateereri.
Ini ndinofunga kuti masocial architecture saiti, REAL idzo, dzakadai sedzinza.net inzvimbo dzakaibva dzekuti muimbi anodzorwa nenhau yekupararira. Panguva ino iyo chaiyo haina mimhanzi yekubata mimhanzi, asi inobvumira yakamisikidzwa malink kune emukati masaiti seYouTube. Ndine MySpace account iyo yakabatana neSnowCap, pandinogona kuseta mutengo werwiyo, ivo vobva vamaka. Ndanga ndichingotamba nayo uye ndinoda kuratidzwa zvakanyanya, saka ndinofanira kufunga nezvekutambira basa rangu kumwe kunhu. Iwo mawebhusaiti makuru anoita kunge ari padanho rekuzara uye akanyura zvizere kuvhidhiyo pamusoro pekurira chete.
Apr 26, 2007 pa 5: 13 PM
Ese emakambani makuru anga achivandudza mazwi avo ekushandisa uye anoenderera mberi achidaro nguva dzose. Zvaizoda kuramba uchiongorora. Ndiri kungoyambira vanhu kuti vanofanirwa kuongorora ese mazwi ekushandisa vasati vaisa chero chinhu chavanofunga kuti ndechavo. Ndingavenga kuona mumwe munhu achirasikirwa nekodzero kumumhanzi wake kana vhidhiyo nekungoisa kune sevha… apo mumwe munhu anogona kuita mari kubva pazviri!
Aug 22, 2008 pa 5: 53 AM
Heino imwe inoshanda imwe Kiqlo
Kiqlo haafarire kuwana kodzero pane zvemukati mako. Kiqlo inokutendera kuti utengese zvirimo iwe uchichengeta copyright yako. Unogona kuiisa mahara, tengesa mahara uye Kiqlo haitore chero kuchekwa kubva mairi. Ichokwadi! Hapana Kubata!
Unogona kudhawunirodha, kurodha pasina login. Kana uchida kutengesa unofanira kupinda mukati. Ipfungwa itsva asi ndeyechokwadi chinangwa ichi.
Gumiguru 21, 2008 pa 2:25 AM
Ndokumbira tizivise zvaunofunga nezve Ourstage.com. Ini nemudzimai wangu tese tiri vanyori venziyo uye takaisa akati wandei nziyo panzvimbo yavo. Mazuva ekutanga takaiswa mutop 10 vashoma vakatopinda number one mudunhu medu and after 4 to 5 days, nziyo dzedu dzese dzinodonhera pasi kana pakati pemaratings uye kuvhota kwenziyo dzedu hakuite. kuita lick of sense kune mumwe wedu?? Vanoti kodzero dzese dzinoramba dziri dzedu uye kuti zvese zvinotengeswa zvichaenda kuaccount yedu yepaypal asi kusvika parizvino hatisati taita kana peni ine ropa kubva panziyo dzedu dzakatumirwa. Tiri kutakurwa here? Ndakaverenga zvakawanda zvechibvumirano asi kwete zvese. Ini as-u-med zvese zvaive kumusoro uye kumusoro asi mushure mekuverenga zvikonzero zvako zvishanu ini handina chokwadi?
Ndatenda neblog rako. Iva nezuva rakanaka uye dai iwe uchinzwa makomborero eizvo hupenyu nerudo zvaunazvo kwauri zuva nezuva.
Muzita rake rakaropafadzwa.
Nov 18, 2009 na10:13 PM
Kune rumwe rutivi usaise mimhanzi yako chero kupi uye usazivikanwa kwehupenyu hwako hwese!
Ehe, gara uchiverenga zvirevo nemamiriro (iwe unenge uchinyanya kuvimba kusadaro) uye kazhinji yenguva izvi hazvizoshungurudzwa.
Ini ndinofunga inyaya yekupa zvishoma kuti uwane zvishoma, haugone kutarisira kuratidzwa pasina kuzvifumura (excuse the expression) Ini ndiri muimbi anonyorera TV/firimu, ndinokwanisa kuita hupenyu hwakanaka kubva mairi uye handidi. mira mukana mugehena dai ndisina kuvimba nevanhu kuti vasashungurudza kutenda mavari kwandakanga ndaisa nekuvapa mimhanzi yangu. (uye ndichiri kuita izvi nguva dzese, zvikasadaro basa raizooma)
Kunyanya kushungurudzwa kwemimhanzi yangu kwakauya mushure mekunge mimhanzi yangu yaridzwa paTV ichibva yatengeswa zviri pamutemo pa iTunes nezvimwe, mumwe munhu akafunga kuitenga ndokuisa pa fansite yeTV show yayakabva, yekudhawunirodha mahara.
Ini ndinobhadharwa ne youtube kana mimhanzi yangu ichiridzwa nekuti ndiyo nzira chaiyo yaunoshanda, kwete sekutaura kunoita chinyorwa (ini ndiri nhengo yesangano rekuunganidza rinoita chokwadi cheizvozvo) PRS.
Saka ndapota usaore mwoyo nechinyorwa ichi.
Dec 4, 2009 pa 12: 27 AM
Iwe unofunga kuti vanhu vachadirana kune yako saiti iri kumashure-yakasimwa chikamu cheinternet kuti vaone mashoma mavhidhiyo? Vanhu vanoenda kuYouTube nemamwe mawebhusaiti nekuti vane mukurumbira uye vanhu vane mukana wekuona zvirimo. Ndingati yakanaka 80%+ yevagari vekusimudza havana basa kuti vanoishandisa here kana kuti kwete, ndinoziva kuti handidaro. Chokwadi vanowana mahara hits pane yavo saiti, asi ndiro bhizinesi ravo. Iwe unenge usiri kuisa kwavari kana vasina kuwana hits. Nzira chete yekutenga saiti uye kuwana copyright pane zvako zvirimo ndeye kana uri boka rinozivikanwa, rine mukurumbira rinogadzira akawanda emavhidhiyo uye/kana mifananidzo. Zvikasadaro unenge uchingoridza nyanga yako uye kuedza kuve akakosha.